Tilmaamaha Iibsashada | Farmashiyaha RXS
1 Lacagta la Aqbalay
2 Diiwaangelinta Koontada
3 Siyaasadda xubinnimada
4 Sidee loo Iibsadaa Koorso?
5 Kaararka amaahda ee la aqbalay
6 Maxaa Loo Iibsanayaa Koorsadeena?
Lacagta la Aqbalay
Dhammaan qiimaha koorsooyinka waxay ku jiraan US dollars. Waxaan inta badan aqbalnaa bixinta lacagta doolarka Mareykanka, dhanka kale lacagaha kale ee waa weyn waa suurta gal laakiin wadarta qadarka wey kala duwanaan doontaa iyadoo lagu saleynayo sicirka sarrifka bartilmaameedka iyo siyaasadaha canshuuraha ee waddan kasta.
Si loo iibsado koorso kasta ama aad xubin uga noqoto xarunteenna, macaamiisha / barayaashu waa inay marka hore iska diiwaangeliyaan koonto shakhsi ahaaneed oo ay ku siinayaan macluumaadka soo socda:
Da'da (loo baahan yahay)
Taariikhda dhalashada (waa loo baahan yahay)
Baasaboor / ID nr. (loo baahan yahay)
Xirfadda hadda (loo baahan yahay)
Nambarada taleefanka gacanta (waa loo baahan yahay)
Cinwaanka emaylka (loo baahan yahay)
Hiwaayadaha & danaha (ikhtiyaar)
Noocyada bulshada (ikhtiyaar)
Markii si guul leh loogu diiwaangeliyo xubin ka noqoshada xarunteena, isticmaaleyaashu waxay geli karaan koontadooda wakhti kasta si ay ugu raaxaystaan ​​boqolaal casharo bilaash ah & waxtar leh. Markii ay iibsadaan koorso, koontadooda waxaa lagu xisaabin doonaa qodobbo. Dhibcahaani waa la ururin doonaa si loogu kala saaro dadka isticmaala nidaamka xubinnimadayada. Heer kasta waxaa lagu abaalmariyaa mudnaan iyo qiimo dhimis kala duwan.
Waad eegi kartaa heerka xubinnimadaada halkan.
Sidee loo Iibsadaa Koorso?
Dhagsii badhanka koorsada Iibso, kadib bixi macluumaadka kaarkaaga deynta si aad u dhameystirto iibka. Haddii aad dooratay inaad kaydiso macluumaadkan, si otomaatig ah ayaa laguu buuxin doonaa si aad ugu sii socoto kormeerka kaliya 1 guji oo keliya.
Kaararka amaahda ee la aqbalay
* Canshuuraha waxaa xisaabiya bangiga xaafadaada iyo meesha ay ku taalo.
Maxaa Loo Iibsanayaa Koorsadeena?
Cusbooneysiiyay waxyaabaha si joogto ah
Hubinta & lacag-bixinta lacag-la'aanta ah
Helitaan fudud & dashboard isticmaale caqli badan